कूल मतदाताको ७७ प्रतिशत सदर मत गनिसक्दा पनि सकिएन समानुपातिक गणना – MySansar
कूल मतदाताको ७७ प्रतिशत सदर मत गनिसक्दा पनि सकिएन समानुपातिक गणना
निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ को निर्वाचन सकिएपछि औसत ७० प्रतिशत मत खसेको भन्दै यसलाई ऐतिहासिक सफलता भन्दै प्रचार गरेको थियो। त्यही बिहान बाँके ३ को केन्द्रमा मत खसाउने बित्तिकै कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले यसपालि ७० प्रतिशत जति मतदान हुन्छ भनेर बाइट दिएको टेलिभिजनका फाइलहरुमा सुरक्षित नै होला। प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सकिएको यत्रो दिन बित्दा पनि आयोगले ठ्याक्कै कति मत खसेको हो बताउन सकेको छैन। आयोगको वेबसाइटमा रहेको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा कूल मतदाता १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८६५ भएकोमा प्रत्यक्षतर्फ कूल ९० लाख ४० हजार ४५१ मत खसेको छ जुन कूल मतदाताको ७४.४२ % हो। समानुपातिकमा भने प्रत्यक्षतर्फ मत खसाल्न नपाएका सेना, प्रहरी र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुले पनि मत खसाउन पाउने भएकोले त्योभन्दा बढी मत खस्नु स्वभाविक हो। तर आयोगले दिउँसो ३ बजे २३९ क्षेत्रको मतगणना भन्दै राखेको ९३ लाख ७७ हजार ५१९ मत भनेको सदर मतको संख्या मात्रै हो। यही मात्रै ७७.१९ प्रतिशत भइसक्यो। बदर मतको पनि हिसाब गर्ने हो भने ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने देखिन्छ। अघिल्लो संविधान सभामा प्रत्यक्षतर्फ बदर ५.१५ र समानुपातिकमा ३.६६ प्रतिशत मत बदर भएको थियो। झण्डै १० प्रतिशत मतको हिसाबै पहिलो दिन निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतिले नपाएका रहेछन्। किनभने उनले निर्वाचन सकिएपछि मिडिया सेन्टरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा ७० प्रतिशतभन्दा एक दुई प्रतिशत माथि तल हुनसक्छ भनेर भनेका थिए। १० प्रतिशत भनेको चानचुने पक्कै हैन। यति धेरैको हिसाबै राख्न नसक्नुको कारण के होला?
अब प्रत्यक्षतर्फ माओवादीले जितेको सप्तरी २ को मात्रै मतगणना बाँकी रहँदा समानुपातिक सिट कसले कति पाउला त ? प्रोजेक्सन भित्र हेर्नुस्-
7 thoughts on “कूल मतदाताको ७७ प्रतिशत सदर मत गनिसक्दा पनि सकिएन समानुपातिक गणना”
निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीकै बदमासी हो , साथि हो !
यो खसेको भन्दा बढी भएको मत ले चुनाब मा धाँधली भएको दरो संकेत दिन्छा! हजार, दस हजार मत को फरक होइन १० देखि १५ लाख मत को कुरा छ! १) चुनाब मा तेस्रो घेरामा मात्र बस्ने भनेको सेना मत खसाल्ने ठाउँ सम्म निर्बाध पुग्नु २) मत पेटिका सेना र प्रहरी ले मात्र लिएर जानु र घन्टौ सम्म उनीहरुले राख्नु ३) पार्टी प्रतिनिघि लाइ मत पेटिका ओसार्ने काम मा सहभागी नगराउनु अझ निरुत्साहित गर्नु, कहिँ लाति ले भकुर्नु कहिँ गोलि ले सुताई दिन्छु भन्नु ४) सिल तोडिएको मत पेटिका हुनु ५) पार्टी प्रतिनिधि को मुचुल्का न उठाउनु , ६) मत पत्र रातभर राखेर भोलि पल्ट सरकारी हाजिर गरे जस्तो ८ बजे – १० बजे बाट गन्न सुरु गर्नु र अन्तमा १०-१५ लाख बढी मत पत्र बढी पाइनु सामान्य कुरो होइन!
येदि नियोजित धाँधली होइन भने, निर्बाचन आयोग ले कुन कुन मतदान केन्द्र मा बढी मत खस्यो, के कारण ले लेखिएको भन्दा देखिएको वा पाइएको मत बढी हुन गयो आफै सत्य तथ्य कुरा पत्ता लगाई जनता समू ल्याउनु पर्छ नत्र भने जोड घटाउ जान्ने केटाकेटी ले पनि पत्यौदैना १०-१५ लाख मत पत्र फरक परेको निर्बाचन निस्पक्ष्य र धाँधली रहित हो भनेर!!!!!!!!!!!!
निर्बाचन मा कति मत खस्यो भन्ने कुरा निर्बाचन आयोग ले मतगडना गरिसक्दा पनि भन्न नसक्नु भनेको चै राम्रो संकेत पक्कै पनि होइन,कि त भने निर्बाचन मा धाधोली भएकै हो नत्र भने निलकण्ठ ले निर्बाचन आयोग का कर्मचारी र लोक सेबा पास गरेर आएका सरकारी कर्मचारी नै असक्षम छन् भन्नु पर्यो,निर्बाचन मा कुन मतदान केन्द्र मा कति जना ले मतदान गरे भन्ने तथ्यांक त पक्कै राखेको थियो होला नि,अनि निर्बाचन सकिए पछि सबै मतदान केन्द्र को संख्या जोडेर ल येति मत झर्यो भन्न कुनै पिएचडी गरेको कर्मचारी चाहिन्छ जस्तो कम्तिमा मलाइ चै लाग्दैन है,हो येति मत झर्यो अब सदर कति बदर कति,कुन पार्टी को कति मत झर्यो र कसले जित्यो त्यो कुरा मतगडना भैनसकी भन्न सक्ने कुरा भएन तर कति प्रतिसत/संख्या मा मत झर्यो पनि सहि र एकिन भन्न नसक्नु ले चै गम्भीर संका उत्पन्न गरेको छ है,
धादली भाको छ जस्तै चाहि लाग्छ , तर माओबादी साथीहरु ले भने जस्तो सब नतिजा नै कायापलट हुने धादली भने भाको छैन ल!
अब पनि कसैले धाँदली भएको होइन भनोस् त लु । धाँदली भएकै हो । सेनाले लटरपटर पारेकै हो । तर अब दुईटामात्र विकल्प छन् । १. अदालतमा जानु । २. संविधानसभामा खुरुखुरु जानु । देशीविदेशी शक्ति लागेरै हराएका कारण अदालतमा गएर केहि होला जस्तो लाग्दैन । यसैले प्रतिगमन रोक्न संविधानसभामै गएर माओवादीले आफ्ना सबैकिसिमका गल्तिप्रति पश्चाताप गर्दै जनताको हित हुने संविधान लेख्नुपर्छ । सबैलाई थाहा छ, माओवादी बिग्रिएको हो तर यति सारो होइन ।
म महेश जी को पक्छ्य वा बिपक्छ्य मा नलागी एउटा सानो चुनाबी math पस्कन चाहन्छु:
निर्वाचन आयोग को अहिले सम्म को गडना अनुसार समानुपातिक तर्फ करिब ९३ लाख मत सदर भएछन, अरु ४ लाख (अनुमानित) बदर मत जोडदा कुल मत ९७ लाख हुन आउछ. यो १ करोड २१ लाख मतदाता को ८० प्रतिसत हो. यदि ७० प्रतिसत जति भोट खसेको भए झन्डै ८५ लाख कुल मत हुनुपर्ने हो. यी दुइ प्रतिसतको फरक भनेको करिब १२ लाख भोट हो. यदि यो १२ लाख लाइ २४० वटै निर्बाचन क्षेत्र मा समान हिसाब ले बाड्ने हो भने ५ हजार भोट (प्रति निर्वाचन क्षेत्र) हुन आउछ. तर यथार्थ मा सबै निर्वाचन क्षेत्र मा ५ हजार भन्ने कुरो हुँदैन. धेरै जनसंख्या भएका क्षेत्र (जस्तो कि काठमाडौँ क्षेत्र न. १०) दश देखि १५ हजार को कुरो हुन सक्छ भने मनाङ्ग वा मुसतान मा केहि सय वा हजार जति मै पासा पल्टिन्छ.
यदि साँची नै ८० प्रतिसत नै मत खसेको हो भने त यो पटक आठौ आस्चर्य नै भएछ.
भने पछी माओवादी ले लगाएको धादली को आरोप मा सत्यता पो छ कि के हो ? हारेर एस्तो आरोप लगाएको होला भनेर भनियो तर अहिले प्राप्त भएको मत गन्दा त निर्वाचन आयोग ले भनेको भन्दा बढी प्रतिशत मत देखिनु, अझै सम्म निर्वाचन आयोग ले स्पस्ट प्रतिशत भन्न नसक्नु ले दाल मा कुछ कालो त छैन? हारेको माओवादी ले लगाएको आरोप त हो भनेर यस्लाई सामान्य रुप मा मात्रै लिनु हुन्न कि के हो ?